Amakristalu we-Nonlinear Optical, Amakristalu we-Laser - iDien
Nd: Amakristalu e-GdCOB
Mayelana neDien Tech
Njengenkampani yezobuchwepheshe esebenza ngamandla, yamakristalu, iDIEN TECH igxile kakhulu ocwaningweni, ekwakhiweni, ekwenziweni nasekuthengisweni kochungechunge lwamakristalu angama-nonlinear optical, amakristalu e-laser, amakristalu we-magneto-optic nama-substrates. Izinto ezisezingeni eliphakeme nezokuncintisana zisetshenziswa ngokuqinile ekufayelweni kwezimakethe zesayensi, zobuhle nezimboni. Ukuthengisa kwethu ngokuzinikezela kanye namaqembu obunjiniyela abanolwazi azibophezele ngokuqinile ekusebenzeni namakhasimende avela ebuhleni nasefayilini yezimboni kanye nomphakathi ocwaningayo emhlabeni jikelele ngezicelo eziyinselele eziyinselele.
Amandla amakhulu kanye namandla aphezulu we-laser technology kanye nesemina yokufaka isicelo ngoSepthemba 26th-28th, 2021 I-laser yamandla ephezulu ngokususelwa kumandla ayo nemiphumela yamandla, kube negalelo elikhulu ekuthuthukiseni i-physics, isayensi yezinto ezibonakalayo, isayensi yezempilo, amandla okuthola amandla. A ...
I-CIOP Ingqungquthela yaminyaka yonke enezihloko eziphelele zokukhanya ne-photonics, yaqalwa ngo-2008 yi-Chinese Laser Press, iShanghai Institute of Optics and Fine Mechanics, Chinese Academy of Sciences. ...
I-AgGaS2 crystal 39 ° / 45 ° yesicelo esibanzi se-spectrum enamathela
I-AgGaS2 crystal 39 ° / 45 ° i-ultrafast application wide wide spectrum Coating isetshenziswe ngempumelelo i-AgGaS2 crystal 8 * 8 * 10mm uncoated AgGaS2 crystal 8 * 8 * 1mm coa ...